Thursday, 14 October 2010 by chanye`
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိက အရောင်းဆင်တာတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်...။
လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်သူဌေးတစ်ဦးနှင့်အတူ ဓာတ်လှေခါးထဲတွင် မီးပျက်၍ ပိတ်မိနေ၏။ နောက်ဆုံး ပြန်သူများဖြစ်သောကြောင့် အကူအညီတောင်းရန်မလွယ်ကူပေ။ နောက်ရက်မှစ၍ အရောင်းဆင်တာ တစ်ခုလုံး သီတင်းကျွတ် ၅ရက် ပိတ်မည်ဖြစ်သည်။ အရေးပေါ်ခလုပ်ကို နှိပ်သော်လည်း အလုပ်မလုပ်သဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကျသွား၏။ ဤအခြေအနေတွင် အောက်စီဂျင်အခဲအခက်ကြောင့် ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်ကြာလျှင် အသက်ပါသေဆုံးနိုင်သည်။
၂ ယောက်စလုံး မထင်မှတ်ဘဲ လတ်တလောဖြစ်ပွားခဲ့သော ချီလီနိုင်ငံမိုင်းတွင်းပိတ်မိသော လုပ်သမားများအဖြစ်အပျက်ကို တွေးမိပြီး မဆီမဆိုင်ပျော်ရွှင်သွားသည်။
နောက် ၂ ၊ ၃ ရက်အကြာ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများ သူတို့ကိုလာကယ်မည်...
သူတို့လွတ်မြောက်လာသောအခါ လူတကာက ဝိုင်းဝန်း ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုကြမည်...
စသဖြင့်တွေးရင်း အရေးပေါ်ကယ်တင်ရေးကို ဆက်သွယ်နိုင်လျှင် အဆင်ပြေပြီဟု စဉ်းစားပြီး ဆက်သွယ်ရေးအတွက် တိုင်ပင်ကြသည်။
သူဌေးက လက်ထဲရှိ GSM ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်သည်...
ဟန်မပျက်ဘဲ ခါးကြားတွင်ချိတ်ထားသော ၅သိန်းတန် ဖုန်းကိုထုတ်၍ ကြည့်လိုက်သည်..
service signal အပြည့်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကို မချိပြုံးပြုံးပြလိုက်ပြီး မီးသတ်ကို ဖုန်းလှမ်းခေါ်သည်
စိတ်ဓာတ်မကျသေးဘဲ နောက်ထပ် ကန်းရိုးတန်းဖုန်းကို ထပ်ထုတ်ပြီးခေါ်သည်...
လိုင်းဝင်သည်။ သူပြောတာ ကိုယ်မကြား၊ ကိုယ်ပြောတာလည်း သူကြားပုံမရ။ "မကြားရဘူး"ဟုပြောလိုက်သော အသံတစ်ခုသာ ကောင်းကောင်းကြားလိုက်ရပြီး ဖုန်းကျသွားသည်။
မျှော်လင့်ချက်မရှိသလောက် ဖြစ်နေချိန်တွင် ခေတ်မီသော လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက သူဌေးထံမှ iphone ကိုမြင်၍ internetကို wireless ဖြင့်ဝင်ပြီး ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းကြည့်ရန် အကြံပေးသည်။
အကြံပေးသည့်အတိုင်း အိုင်ဖုန်းဖြင့် အင်တာနက်ချိတ်ကြည့်ရာ wireless မိသည်။၂ယောက်လုံးပျော်သွားသည်။ နည်းပညာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲ။
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ ဓာတ်လှေခါးကိုဖွင့်ထုတ် ကယ်ဆယ်ခဲ့သော်လည်း နှစ်ဦးစလုံးအသက်ရှူကြပ်ပြီး သေဆုံးနှင့်လေပြီ။
သေဆုံးသူတို့ အနီးတဝိုက်တွင် ဟန်းဆက် ၄လုံးကိုတွေ့ရပြီး ၄င်းတို့အနက် အိုင်ဖုန်းတွင် Gmail page ကို loading လုပ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရလေ၏။
သေဆုံးနှစ်ဦးအား ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နေရာတကာပါဝင်တတ်သော ပါလရာကြီး ၄ဦးမှ အောက်ပါအတိုင်း လှူဒါန်းနှစ်သိပ်ပေးခဲ့သည်။
* မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်က ကျန်ရစ်သူမိသားစုအတွက် MNLဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ အခမဲ့ကြည့်ခွင့် လက်မှတ်
Posted in: ပေါက်ကရ အစုံအလင် |5comments | |
ဘာကြောင့် အရက်သောက်ရတယ် ( ပညာပေးဆောင်းပါး)
Wednesday, 29 September 2010 by chanye`
အသီးမှာ သရက်၊ အသားမှာ ၀က်၊ အရွက်မှာ လက်ဘက်၊ အရည်မှာ အရက်ရည်လို့ စာဆိုရှိပါတယ်။
အနံ့အရသာထူးကဲကောင်းမွန်တဲ့ အရက်ကို အချို့လူများ မကောင်းမြင်ကြတာ ကျွန်တော် အံ့သြမဆုံးဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီဆောင်းပါးလေးရေးမိတာပါ။
ကျမ်းဂန်တွေမှာပါတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်တတ်အပ်တဲ့ အဌာရသ ၁၆ ချက်မှာ အရက်သောက်ခြင်းဆိုတာ တစ်ခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ဟုတ်လိုက်)
ခေတ်သစ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး ဆုံးမထားတဲ့ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။
“ထိတွေ့သင့်ရာ၊ ယမကာနှင့်၊ လိမ်ညာလှည့်ဖျား၊ ဘိန်းဆေးဝါးပြင်၊ ဖဲရိုက်သင်၍၊ မြင်သမျှခိုး၊ ချဲလဲထိုးပြီး၊ လူဆိုးပေါင်းသင်း၊ ဆက်ဆံရင်းမှ၊၊ ကောင်းမှုရကာ၊ သုခစိတ်မှာ ဖြစ်လတ္တံ့” လို့ ဆုံးမခဲ့ဖူးတာရှိပါတယ်။
အရက်သောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ရော လူမှုရေးရှုထောင့်ကပါ ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့် အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ပါ။
အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ပိုမိုလျော့နည်းစေတယ်လို့ သုတေသီတွေကဆိုပါတယ်။
အရက်ကို တစ်ပတ် ၃-၄ ကြိမ်သောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါသာသောက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ထက် နှလုံးရောဂါ ရရှိနိုင်မှုနှုန်းပို နည်းတယ်လို့ Harvard Medical School က Dr. Kenneth Mukamal ကိုယ်တိုင် ၁၂နှစ်တိတိ အရက်သောက်သူတွေကို လေ့လာထားတဲ့ စစ်ချက်အရတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အရက်ဟာ Cholesterolကို ထိန်းပေးတယ်လို့လည်း ဆရာဝန်အတော်များများက လက်ခံထားပါတယ်။
လူမှုရေးရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုလဲ အရက်သောက်တတ်ခြင်းဟာ မိတ်ဆွေများနဲ့ပေါင်းသင့်ဝင်ဆံ့နိုင်ရေးမှာ များစွား အထောက်အကူပြုပါတယ်။ နိုင်ငံတော် ညစာစားပွဲတွေမှာတောင် ဝီစကီမဟုတ်ရင် ဝိုင်(သို့)ရှန်ပိန်လောက် အနည်းနဲ့အများသောက်ကြတာကိုတွေ့ကြမှာပါ။ အားကစားပြိုင်ပွဲမှာဆုရရှိသူတွေဟာ ရှန်ပိန်ပုလင်းတွေဖွင့်ဖောက်ပြီးပျော်မြူးကခုန်ကြတာကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။
အောင်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာသာမက ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်း အရက်သောက်ပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေ ဖြေဖျောက်ကြရပါတယ်။
ကိုယ်ချစ်ရင်ချစ်သလောက် ပြန်မချစ်ခံရတဲ့ အစွန့်ပစ်ခံအသည်းကွဲသူများဟာ ကိုယ်သောက်ရင်သောက်သလောက်မူးတဲ့ အရက်ကိုနှစ်ခြိုက်တတ်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။
အရက်က ကျွန်တော်တို့အပေါ်သစ္စာရှိသလို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း အရက်ကိုသစ္စာရှိရမှာပါ။
ငွေမတတ်နိုင်လို့ပါဆိုတဲ့ ဆင်ခြေနဲ့ အရက်ကို ပစ်မထားသင့်ပါဘူး။ အခုအခါ နိုင်ငံတော်ကလည်း စေတနာမေတ္တာထားပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် အရက်ကုမ္မဏီကြီးတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ပြုထားလို့ အရက်ကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ လူတန်းစားမရွေသောက်သုံးနိုင်လာပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ မျိုးရိုးမှာဆို ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် အရက်နဲ့လက် ပြတ်ခဲ့တဲ့လူလို့မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဦးလေးဆိုရင် “အသက်နဲ့ခန္ဓာသာဖြတ်ရင်ဖြတ်လိုက်မယ် အရက်ယမကာကိုတော့ မဖြတ်ဘူး” ရယ်လို့ သန္ဓိဌာန်ချပြီး အရက်နဲ့အသေခံသွားတဲ့ ယမကာသူရဲကောင်းတစ်ဦးပါ။
ကျွန်တော့အဖေ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ် “ အဖေကတော့ စည်းစိမ်ဥစ္စာအမွေမပေးနိုင်ဘူး။ ပညာအမွေပဲ ပေးနိုင်တယ် သားရယ်” တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း အဖေ့ဆီက အရက်သောက်တဲ့ ပညာကို ရအောင်ယူလိုက်နိုင်ခဲ့လို့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ နိုင်းဝမ်းသီချင်းထဲကလို ကျွန်တော့်အတွက်တော့ “အရက်က တစ်၊ အရက်က နှစ်၊ အရက်က သုံးပဲ” လို့ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆိုးတူကောင်းဖက် ဒီအရက်ကို မသောက်တတ်လည်း သောက်တတ်အောင်ကြိုးစားရင်း ပျော်ရွှင်စရာစိတ်ညစ်စရာမှန်သမျှ အရက်သောက်ရင်း ကုန်လွန် ကျော်လွှားသွားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
Posted in: ပေါက်ကရ အစုံအလင် | 1 comments | |
Friday, 28 May 2010 by chanye`
တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်သောက်နည်း တီထွင်ခဲ့သူကို လေးစားသင့်ပါတယ်။
လူတွေရှာဖွေတွေ့ရှိတာခဲ့တာက စားစရာ သောက်စရာတွေ များတာကိုး ။ ကဲ.. အငွေ့ကို ပါးစပ်နဲ့ရှူရှိုက်ရတဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကတော့ တစ်မျိုးဆန်းသစ်မနေဘူးလား။
~ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ပျောက်အောင် ဆေးလိပ်သောက်ပါ။ စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတဲ့အခါ စားချင် သောက်ချင်စိတ်မရှိဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဆေးလိပ်သောက်လိုက်ရင် (သူများတွေတော့မသိဘူး) ကျွန်တော်တော့ သက်သာတယ်။ ဆေးလိပ်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းရှိုက် စိတ်ညစ်စရာတွေကို သက်ပြင်းရှည်တွေနဲ့အတူ ဆေးလိပ်ငွေ့နဲ့ ရောထွေးမှုတ်ထုတ်လျှော့ချလိုက်ရအောင်။
~ ဆေးလိပ် ကိုယ်တိုင်သောက်မှမဟုတ်ဘူ ဆေးလိပ်ငွေ့ကိုရှူရှိုက်မိရင်လည်း ရောဂါရနိုင်တာပဲလေ။ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေများနေမှတော့ ကိုယ်မသောက်လည်း အနားကလူတွေကြောင့် ကိုယ်တိုင်ရောဂါရနိုင်တာပဲ။ ဆေးလိပ်အနားမှာလာမသောက်နဲ့ဆိုပြီး လူမိုက်လုပ်ပြီး သူများကို အပြစ်တင်နေရင်လည်း မကောင်းဘူး။ ဒီတော့ သူများသောက်ပြီး ကိုယ်ရောဂါရတာကို စောင့်နေမလား?
~ ဆေးလိပ်မသောက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်အတွက်ကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူတွေ ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့။
ဆေးလိပ်သောက်တယ်ဆိုတာ ဒုစရိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်လူတိုင်းမှာရှိကြတယ်။ အစိုးရက မပိတ်ပင်ထားတဲ့ လူအခွင့်ရေးမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက လွတ်နေတော့ သောက်တတ်လေကောင်းလေပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ စစ်တမ်းအရ (smoking area နားသွားပြီး လူ၃ ယောက်တိတိကို survey မေးရာမှာ) လူတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ ဆေးလိပ်သောက်သူများဖြစ်ပါတယ်။
~ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့လူတွေဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ ပိုအ၀င်ဆံ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။
ဥပမာ ဆိုပါစို့။ သူငယ်ချင်း ၄ ယောက် ထမင်းသွားစားကြတယ်။ ထမင်းစားပြီးအပြန် ခံတွင်းချဉ်လို့ဆိုပြီး ဆေးလိပ်သောက်မယ်လုပ်တော့ ဆေးလိပ်သောက်တတ်တယ်လူ ၃ ယောက်က ဆေးလိပ်အတူတူသောက်ရင်း စကားပြောလို့ရမယ်။ ကျန်မသောက်တတ်တဲ့လူက ဘာလုပ်မလဲ။ အဲဒါ အဲဒါ!!! ဆေးလိပ်မသောက်တတ်လို့ လူရာမ၀င်ဖြစ်သွားတာ။ မကောင်းတတ်လို့ သူတို့ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အနားသွား ယောင်တိယောင်ချာလုပ်ရင်း သူတို့ သောက်တဲ့ဆေးလိပ်ကြောင့် ကိုယ်ရောဂါရ ၊ မတန်လိုက်လေခြင်းဗျာ။
ကိုယ်သာဆေးလိပ်သောက်တတ်ရင် ၀ယ်သောက်စရာမလိုဘူး။ ဆေးလိပ်သမားတွေရဲ့ နားလည်မှုအရ သူတို့က အလကားတောင်တိုက်အုံးမယ်။ ဆေးလိပ်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ ချစ်စရာအမူအကျင့်လေးတွေပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မီးခြစ်ငှားမယ်။ ဆေးလိပ်အလကားတိုက်မယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ရင်း စကားပြောမယ်။ ဘယ်လောက်အဆင်ပြေလဲ။ တခါကလည်း birthday cake မီးညှိဖို့ဆိုပြီး တစ်ယောက်မှ မီးခြစ်မပါတော့ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူ ကျွန်တော့်ဆီကို ခခယယ လာတောင်းကြတာမှတ်မိသေးတယ်။
~ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာမကောင်းဘူးဆိုတာ ဆေးပညာအရမှန်ပေမယ့် မကောင်းတာကို မလုပ်ဘူးလို့ လူတိုင်းလက်ခံကြသလား? ကမ္ဘာကျော်ပညာရှိတွေ ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင် Tobaco နဲ့ မကင်းခဲ့ကြပါဘူး။ ဘားရက်အိုဘားမား၊ အလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်း ၊ သောမတ်စ် အက်ဒီဆင်၊ ရောဘတ်ဂရေဟမ် ဘဲလ် အပါအ၀င် နာမည်ကြီး ဆေးလိပ်သမားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ရင် အသက်မရှည်ဘူးဆိုတာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။ ကျွန်တော့်အဘွားကတော့ အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်နေပြီ။ ခုထိ ဆေးလိပ်လေး ပါးစပ်မှာ ခဲထားတုန်း။
လူဖြစ်နေတဲ့ ဒီဘ၀မှာ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်အောင် ကဲ အားလုံး.. ဆေးလိုပ်သောက်ကြပါစို့!!!
Posted in: ပေါက်ကရ အစုံအလင် |7comments | |
Tuesday, 25 May 2010 by chanye`
"ခဏတာ" တဲ့ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်မီးကို သတိရမိလို့ ဆို ပြန်ဖျက်ဆိုထားတးယ်
မနက်အတွက်ပေးမယ် ဒါဟာ နာရီဝက်
Posted in: ရူးပေါဘလော့အတွက်သာ, ပေါက်ကရ အစုံအလင် | 1 comments | |
စင်္ကပူမှာ အရမ်း ချွေတာစုဆောင်းပြီး မိသားစုကိုငွေပို့ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေရဲ့ ဘ၀ကိုစာနာမိလို့
အပြစ်မမြင်ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုဖျက်ပြီး ပြန်ဆိုထားတာ။ အစစအရာရာ ဒေါ်လာနဲ့ပေးရတာဆိုတော့ ရောက်ကာစ မြန်မာတွေစိတ်ဓာတ်ကျမှာစိုးလို့ ဖျက်ဆိုထားတာ။ ဒါပေမယ့် စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ရင် လုပ်သလောက်ရပါသေးတယ်။ အားတင်းထားကြ!!
ကြက်ဥ ဈေး ၅၀၀ မြင်တဲ့ခဏ
ဈေးသွားတဲ့ တို့စိတ်ကူးတွေ အခိုးအငွေ့ဖြစ်ကာရယ်
မစားဘူး တံတွေးလေးသာ မြိုချပါမယ်
စလုံးမှာ ခြိုးခြံဖို့ကို သတိပေးကြပေမယ့်
အဖြစ်က "ကြည့်ငတ်" တဲ့ဘ၀လေးပဲ
အခြောက်အခြမ်းတွေစားကြာတဲ့အခါ အမြဲတမ်း အသည်းငယ်ငယ်
တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းအစီအစဉ် (၅)
Monday, 26 April 2010 by chanye`
(၁) ငပေါဂေဟာစတုဂံဒေသတိုင်း စစ်ဌာနမှူးက ၀ တပ်ဖွဲ့များထံ နံပြားခြောက်ချပ် ဖုတ်ပေးရေး ကိစ္စ အပူတပြင်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ (နာယကကြီး မနက်စာအတွက် အဆင်ပြေစေရန်ဟု သိရ၏)
(၂) ငပေါဂေဟာ ဥက္ကဌသည် ၂၀၁၀ သေးပေါက်ပွဲတွင် ဆီးရွှင်ရန် နှင့် ရန်စွယ်အပေါင်း ကျော်လွှားနိုင်ရန် ဆင်ဖြူတော် ဆားငံစေ့ ၁၀ ကို အစေ့ပါမြိုချရာ လည်ပင်းတွင်အစေ့ဆို့နင့်ပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ အတွင်းလူနာအဖြစ်ထားရှိခံခဲ့ရ၏။
(၃) သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ဗုန်းပေါက်ကွဲခြင်း၏ အဓိကတရားခံသည် ဗုန်းဖောက်ခွဲသူသာ ဖြစ်သည်ဟု ငပေါ ၀န်ကြီးချုပ်က အတိအလင်းပြောဆို။ တွင်း(၂) နေအိမ်တွင်လည်း လုံခြုံရေးတင်းကြပ်လျှက်ရှိရာ အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းများတွင် တံခါးများ တပ်ဆင်ထားကြောင်း ချောင်းကြည့်သူရပ်ကွက်မှ သတင်းရရှိသည်။
(၅) ရင်ခွဲရုံမှ အလောင်းများ ကုတ်ဖဲ့ဖျက်ဆီးခံရမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကြွက်၊ ခြ နင့် ပိုးကောင်များအား
အတင်း အဓမ္မစစ်မေးလျှက်ရှိရာ တရားခံများမှ ၀န်ခံပြောကြားခြင်းမရှိသေးပေ။
(၆) လွန်ခဲ့သော တနင်္လာနေ့မတိုင်မီ ၂ရက်က တွင်း(၂)သည် ဂေဟာရန်ဘုန်းငွေ အမြောက်အများကို ကတ်စီနိုကစားဝိုင်းတွင် ရှုံးပြီးနောက် "ရရင်ရ မရရင် မ" ဟုဆိုကာ chip ပြားများခိုးယူသဖြင့် ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း နှင့်အတူ ဂေဟာမှ ချီးမြှင့်သော "ပြည်သူကုန်စေ" ဆုချီးမြှင့်ခံရသည်။
Posted in: ရူးပေါဘလော့အတွက်သာ |3comments | |